Yakavandudzwa Apple Watch SE uye imwe ine hunhu hwemitambo ye2022 | Nhau dzepaphone
Iyo yakagadziridzwa Apple Watch SE uye imwe ine hunhu hwemitambo ye2022
Isu tinosvika pakupera kwegore uye kambani yeCupertino yave panguva ino yekusaita senge kuneta. Nechikonzero ichi, nhau dzepamutemo hadziende mberi kweshanduro nyowani dzeakasiyana masisitimu anoshanda uye Mishandirapamwe yeKisimusi yekupa zvishandiso.
Muchiitiko ichi runyerekupe rwezvishandiso zvitsva zvingangove zvatotonga vamwe, saMark Gurman. Muongorori anozivikanwa anoratidza kuti pamwe neApple Watch Series 8, Apple iri kuronga a Apple Watch SE gadziridza uye pamwe sarudzo yemitambo yewachi kuti vamwe vatoratidza kuti inogona kunge yakafanana nedhizaini yenhoroondo yeCasio G-Shock.
Iyo Apple Watch SE ine shanduko here?
Zvinogoneka kuti vazhinji vachiri kumirira vhezheni itsva yewachi kutanga kwegore asi isu hatitombotendi kuti ndizvo zvazviri. Iyo yazvino Apple Watch SE yakatangwa munaGunyana 2020 uye chinhu chakachengeteka ndechekuti mhando itsva, kana dzikasvika, dzichazviita mumwedzi iwoyo we 2022. Mubvunzo uri pano ndewekuti kana iyi modhi inoda chaizvo shanduko sezvo Apple iine semuenzaniso wehupfumi, kubva pakupinda, uye kuwedzera Chii zvitsva zvinogona kuita kuti mutengo wako ukwire.
Chero zvazvingava, shanduro dzeSE dzinogara "dzichishandiswazve" kubva kune mamwe maturusi uye naizvozvo Isu hatitendi kuti Apple ichasimudza mutengo wekupedzisira weiyi modhi zvakanyanya, inogona kubata nemutengo wazvino wazvino mushanduro nyowani muna 2022.
Kune rimwe divi, maererano naGurman, pane mukana wekuti Apple ichavhura imwe yemitambo uye inopikisa modhi. Iyi inonzi Apple Watch nyowani, ichave ne "yakasimbiswa" dhizaini iyo inogona kuwedzera imwe inopikisa kesi kumakwara, mabumps, kudonha nezvimwe zvakadaro. Ndosaka paine kutaura kweinobvira Apple Watch ichitevedzera ngano yeCasio wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yakagadziridzwa Apple Watch SE uye imwe ine hunhu hwemitambo ye2022
WhatsApp inoedza dhizaini nyowani mumameseji ezwi mune yayo beta ye iOS